Blue Dragon Linen Dress | Buddhatrends
AKWỤKWỌ NDỊ NA-AHỤ N'AKWỤKWỌ NDỊ KWURU, ANYỊ BỤGHỊ ANYỊ NA-EME ỌZỌ KWESỊRỊ ECHICHE
Ụlọ ahịa site na agba
Akwa edo edo
Coral na Ejiji Akara
Uwe Akwa Umu Agha
Uwe uwe Khaki
Ahịa site na Size
Ụlọ ahịa site na Style
Boho Chic uwe
Akwa uwe ndị China
Akwa uwe Maxi
Ọzọ uwe akwa
Lelee uwe niile
Ọzọ Size Ngwa
Lelee Bottoms Niile
Sweaters na Pullovers
Uwe a na-eyi akwa
Sweaters ka ukwuu
Ọfụma na uwe
Uwe ákwà linin
Owugbo na ejiji
Azu na Shawls
Anwụrụ akpụkpọ ụkwụ
Ọkụ & Ihe Nri
Akpụkpọ anụ linen
Nkasi Obi n'enyeghi Mmetuta
Ejiji na-adịghị mma
Mgbanwe nke ụdị dị iche iche
Afọ Ojuju nkwa
Weghachite & Nkwụghachi
Your Cart bụ Efu
Blue Dragon Linen Dress
$ 43.92 $ 73.20 Ị chekwaa 40% ($ 29.28)
Gwa m mgbe ngwaahịa a dị:
Otu Size / Blue
Nweghachi na mgbanwe
Eji akwa na akwa linin dị elu, na-ele anya dị ukwuu ma na-enwe mmetụta dị nro mgbe ị na-eyi uwe a kacha mma.
Zuru oke maka oge ọ bụla ma ọ bụ oge pụrụ iche, ogologo ikiri ogologo nke ikpo okwu na mkpịsị aka n'olu nwere ihe na-atọ ọchị na nke pụrụ iche nke ga-ele anya ka ị na-aga ọrụ gị kwa ụbọchị.
Na-arụ ọrụ nke ọma na leggings, cardigans, scarves, na flats, ụdị ya dabere na ọnọdụ gị. A na-enweta ya na mpempe akwụkwọ dị iche iche na akpụkpọ anụ ụda ire ụtọ, na-achọ nchacha nke na-agbanyeghị aka ugbu a na ntinye nke òké.
Ihe: Owu na Linen
Ogologo Mgbatị: Ankle-Ogologo
Nke a bụ nha maka edemede gị:
Ogologo: 125 cm, Bust 140 cm
Nweta nzipu zuru ụwa ọnụ na iwu niile. Ọ dịghị nke kachasị mkpa.
Anyị na-akwado ndị ahịa anyị na ụbọchị 30 azụ ma ọ bụ akwụkwọ nkwekọrịta. Ọ na-enyere gị aka ịzụta ihe na àgwà enweghị nchegbu ma nwee ahụmahụ dị egwu na ụlọ ahịa na Buddhatrends.
Mgbanwe, Nweghachi & Nkwụghachi:
Iji weghachite ihe a biko gaa na nloghachi nloghachi anyihttps://www.buddhatrends.com/pages/returns-exchange
Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro iji zipu foto nke ihe mebiri emebi / agbajikwa. Ọ ga-enye aka ma ọ bụrụ na ị zipụ foto doro anya nke nkwarụ.
Ọ bụrụ na ihe ahụ ezughị oke na ịchọrọ ịgbanwe ya n'ihi ụda / agba ma ọ bụ enweghị mmasị na ihe ahụ, enwere ike iweghachi ya ozugbo. Onye ahịa ahụ ga-akwụ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ mbupụghachi, njikwa yana ebubo nkwụghachi.
GỤKWUO: Anyị ekwuola nkọwa zuru ezu na ngwaahịa njikọ ọ bụla na ihe nhata nke centimita, biko nyochaa nke a tupu ị debe iwu ma zere ọ bụla obi ụtọ mgbe e mesịrị.
Usoro njikwa anyị dị ezigbo mkpa, mana ihe ndị a na-atụghị anya ya nwere ike ime. N'ihe gbasara ụcha ma ọ bụ nha, kọọ ozugbo nkwado onye ahịa, nyekwa anyị foto nke ihe ahụ iji dozie nsogbu ahụ ozugbo o kwere mee.
Buru n'uche na ozi ezipụ na nzaghachi dịgasị dabere na obodo gị na ngwaahịa gị. Ya mere, anyị na-akwado gị ka ị gbaso usoro ahụ na nchịkwa nchịkwaghachi anyị dị ka nkọwa niile, nzaghachi na ntụziaka ga-adị n'ime usoro nlekọta nchịkwa.
N'ihe banyere eji, saa, mebiri ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla ọzọ site na ọnọdụ mbụ nke ihe ahụ, anyị agaghị ekwe nkwa na ngwa ngwa. Usoro nloghachi ahụ na-ekwupụtakarị ọnọdụ ndị a dị ka akụkụ nke iwu nlọghachi ihe ahụ. A gaghị anabata ihe ọ bụla na-enweghị ọnọdụ mbụ yana nkwakọ ngwaahịa.
Jiri nhazi mbupu nke kachasị ọnụ ala dị na mba gị. N'ihe banyere ihe a na-egbochi na omenala, anyị agaghị akwụ ụgwọ maka ọrụ ụtụ isi / mbubata nke ihe ahụ.
Maka iwu nloghachi, ị ga-ekwupụta na ngwugwu dị ka "Ahịa Nweta 0 $ Uru."
Maka nhichapu nke ihe ahụ, ị ​​ga-akpọtụrụ anyị n'ime oge 12 nke ntinye ego. Enwere ike ihichapụ ihe ọ bụla ezipụrụ.
Enwere ike ịnyeghachi Nkwụghachi ma ọ bụrụ na ejighachị ihe ahụ na mbute mbụ na ọnọdụ na-adịghị mma. A ghaghi inye ihe nchikota ka o ruru eru maka nkwụghachi.
Akwụghachighachiri nkwụghachi ụgwọ dabere na nkwụnye ụgwọ mbụ onye ahịa na-ahọrọ mgbe ị na-eme iwu ahụ. Akwụghachi ụgwọ PayPal n'otu ụbọchị nke ịnweta ihe azụ na adreesị ozi-e anyị nwere ike ịdị iche na-adabere na ọnọdụ nke onye ahịa iji zere ebubo ebubo dị elu. Ihe nkwụnye ego kaadị akwụmụgwọ na-ewe gburugburu 10-15 ụbọchị n'ozuzu dị ka nke a bụ oge akụ azụ maka nkwụghachi.
A ga-akwụ ụgwọ ego maka nkwụghachi / mgbanwe / ngbanwe ma ọ bụghị karịa 25% nke ọnụ ọgụgụ ego dum.
Otu onye nkwado anyị dị njikere mgbe niile iji kwado ndị ahịa. Naanị ị chọrọ iji "Kpọtụrụ Anyị" maka ibe ọ bụla, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka dozie nsogbu gị.
collections: All, Uwe niile, All Products, Blue, Akwa Uhie, Uwe mara mma, Cotton, Azụ Ákwù, Uwe ákwà linin, Uwe ejiji ogologo, Akwa uwe Maxi, Uwe mara mma, otu Size, Uwe Edemede, Ahịa nke izu, Mmiri 2018, N'okpuru $ 50, Ụdị Ochie, Uwe Achacha
Loose A Line Flowy Maxi Dress $ 27.00 $ 54.00
Black / S Black / M Black / L Black / XL Black / XXL Black / XXXL Black / 4XL Black / 5XL Brown / S Brown / M Brown / L Brown / XL Brown / XXL Brown / XXXL Brown / 4XL Brown / 5XL Green Green / S Army Green / M Army Green / L Army Green / XL Agha Green / XXL Agha Green / XXXL Army Green / 4XL Army Green / 5XL Purple / S Purple / M Purple / L Purple / XL Purple / XXL Purple / XXXL Purple / 4XL Purple / 5XL Orange / S Orange / M Orange / L Orange / XL Orange / XXL Orange / XXXL Orange / 4XL Orange / 5XL Yellow / S Yellow / M Yellow / L Yellow / XL Yellow / XXL White / S White / M White / L White / XL White / XXL Brick Red / S Brick Red / M Brick Red / L Brick Red / XL Brick Red / XXL Brick Red / XXXL Brick Red / 4XL Brick Red / 5XL Yellow / XXXL Yellow / 4XL Yellow / 5XL White / XXXL White / 4XL White / 5XL
Sleeveless Maxi Dress $ 44.50 $ 89.00
White / S White / M White / L White / XL White / XXL White / XXXL Red / S Red / M Red / L Red / XL Red / XXL Red / XXXL Red / 4XL Red / 5XL White / 4XL White / 5XL Green / S Green / M Green / L Green / XL Green / XXL Green / XXXL Green / 4XL Green / 5XL Blue / S Blue / M Blue / L Blue / XL Blue / XXL Blue / XXXL Blue / 4XL Blue / 5XL Black / S Black / M Black / L Black / XL Black / XXL Black / XXXL Black / 4XL Black / 5XL
Owuwu Hippia Hirochi nke Floral
Owuwu Hippia Hirochi nke Floral $ 44.50 $ 89.00
Mpempe akwụkwọ Geometric Bipute Uwe Nkita Hippie
Mpempe akwụkwọ Geometric Bipute Uwe Nkita Hippie $ 32.00 $ 64.00
Orange / S Orange / M Orange / L Orange / XL Orange / XXL Orange / XXXL Orange / 4XL Orange / 5XL Grey / S Grey / M Grey / L Grey / XL Grey / XXL Grey / XXXL Grey / 4XL Grey / 5XL Khaki / S Khaki / M Khaki / L Khaki / XL Khaki / XXL Khaki / XXXL Khaki / 4XL Khaki / 5XL White / S White / M White / L White / XL White / XXL White / XXXL White / 4XL White / 5XL
More Size Long Maxi Bohemian Dress
More Size Long Maxi Bohemian Dress $ 27.00 $ 54.00
White / S White / XXL White / XXXL White / 4XL White / 5XL Black / S Black / M Black / L Black / XL Black / XXL Black / XXXL Black / 4XL Black / 5XL White / M White / L White / XL
Ogologo ogologo aka na-agbasapụ ejiji
Ogologo ogologo aka na-agbasapụ ejiji $ 71.20 $ 89.00
Green / Otu Size Purple / One Size Yellow / Otu Size Igwe Grey / Otu Size Ọchịchịrị Ọchịchịrị / Otu Size White / Otu Size
Gypsy Soul Flowy Sundress $ 39.50 $ 79.00
Green Green / S Army Green / M Army Green / L Army Green / XL Agha Green / XXL Agha Green / XXXL Army Green / 4XL Army Green / 5XL Wine Red / S Wine Red / M Wine Red / L Wine Red / XL Wine Red / XXL Wine Red / XXXL Wine Red / 4XL Wine Red / 5XL White / S White / M White / L White / XL White / XXL White / XXXL White / 4XL White / 5XL Black / S Black / M Black / L Black / XL Black / XXL Black / XXXL Black / 4XL Black / 5XL Navy / S Navy / XL Navy / 4XL Navy / 5XL Navy / L Navy / M Navy / XXL Navy / XXXL Orange / S Orange / XL Orange / 4XL Orange / 5XL Orange / L Orange / M Orange / XXL Orange / XXXL Brown / S Brown / XL Brown / 4XL Brown / 5XL Brown / L Brown / M Brown / XXL Brown / XXXL Yellow / S Yellow / XL Yellow / 4XL Yellow / 5XL Yellow / L Yellow / M Yellow / XXL Yellow / XXXL Purple / S Purple / XL Purple / 4XL Purple / 5XL Purple / L Purple / M Purple / XXL Purple / XXXL
3 / 4 Na-agbanye Sleeve Plus Size Long Robe
3 / 4 Na-agbanye Sleeve Plus Size Long Robe $ 46.20 $ 77.00
Blue / L Blue / XL Blue / XXL Blue / XXXL Blue / 4XL Blue / 5XL White / L White / XL White / XXL White / XXXL White / 4XL White / 5XL Red / L Red / XL Red / XXL Red / XXXL Red / 4XL Red / 5XL Green / L Green / XL Green / XXL Green / XXXL Green / 4XL Green / 5XL Black / L Black / XL Black / XXL Black / XXXL Black / 4XL Black / 5XL
Ejiri uwe mwube Bohemia na-echekwa ya
Ejiri uwe mwube Bohemia na-echekwa ya $ 44.50 $ 89.00
agba aja aja / S agba aja aja / M agba aja aja / L agba aja aja / XL nwa / S nwa / M nwa / L nwa / XL agba ntụ / S agba ntụ / M isi awọ / L agba ntụ / XL pink / S pink / M pink / L pink / XL
Nso nso anya ihe
Debanyere-esi ọhụrụ na ahịa, ọhụrụ a na na ndị ọzọ ...
nọrọ na njikọ
© 2018 Buddhatrends. Ikike niile echekwabara